हाथरस सामूहिक बलात्कार : दलित युवतीको जिब्रो काटियो, कम्मर तोडियो, उपचारका क्रममा मृत्यु, दिल्लीमा प्रदर्शन:: Naya Nepal
हाथरस सामूहिक बलात्कार : दलित युवतीको जिब्रो काटियो, कम्मर तोडियो, उपचारका क्रममा मृत्यु, दिल्लीमा प्रदर्शन
सामूहिक बलात्कारमा परेकी उत्तर प्रदेशको हाथरस जिल्लाकी एक युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। परिवारका सदस्यका अनुसार २० वर्षीया उनी जिब्रो काटिएको र कम्मरको हाड भाँचिएर बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
उनको मंगलवार राती दिल्लीको सफदरजंग अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। पीडितलाई सोमवार अलीगढ मुस्लिम युनिभर्सिटी मेडिकल कलेजबाट सफदरजंग अस्पताल ल्याइएको थियो। पछिल्लो दुई हप्तादेखि उनी मृत्युसँग लडिरहेकी थिइन्।
हाथरस पुलिसले घटनाका चारै जना अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा लिएको बताएको छ।
१४ सेप्टेम्बरमा आमा र भाईसँग खेतमा घाँस काट्न गएका बेला उनको चार जाने सामूहिक बलात्कार गरेको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। पीडितका भाईले भनेका छन्, ‘दिदी, आमा र दाई घाँस काट्न गएका थिए। भाई घाँस लिएर पहिल्यै घर फर्कियो। आमा अगाडि घाँस काटिरहेकी थिइन्, दिदी अलि पछाडि थिइन्। दिदीलाई तानेर उनीहरुले बलात्कार गरे। बेहोस अवस्था आमाले फेला पारिन।’ बलात्कारीले उनीमाथि निर्मम कुटपिट गरेका थिए। मर्‍यो भनेर छोडेर गएका थिए।
पीडित युवतीलाई बेहोस अवस्थामा सुरुमा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लगियो। त्यहाँबाट अलीगढ मेडिकल कलेजमा रेफर गरियो। मेडिकल कलेजमा १३ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरियो। सोमवार थप उपचारका लागि सफदरजंग अस्पताल लगियो। जहाँ उनले अन्तिम श्वास लिइन्।
पीडितका भाईले भनेका छन्, ‘दिदीको जिब्रो काटिएको थियो। कम्मरको हड्डी भाँचिएको थियो। शरीरको एक भाग काम गरिरहेको थिएन। बोल्न सकिरहेकी थिइन्। कुनै प्रकारको इशारा मात्र गरिरहेकी थिइन्।’
सामूहिक बलात्कारको आरोप गाउँको उच्च जातिका चार जनामाथि लागेको छ। प्रहरीले चारै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
हाथरसका एसपी विक्रांत वीरले चारै अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरेर हिरासत पठाइएको बताए। अदालतसँग फास्ट ट्रयाक सुनवाईको माग गर्ने उनको भनाई छ। पीडित परिवारलाई गाउँमा सुरक्षा पनि दिइएको एसपी वीरले जानकारी दिएका छन्।
जबरजस्ती जलाइयो शव
परिवारजन र गाउँलेको चर्को विरोधका बीच पीडितको मंगलवार अबेर राती अन्तिम संस्कार गरिएको छ। दिल्लीबाट पीडितको शव मध्यराती हाथरस ल्याइएको थियो। गाउँलेको विरोधका बीच पुलिसले बल प्रयोग गरेर पीडितको अन्तिम संस्कार गरेको हो। पुलिससँग गाउँलेको धकेलाधकेल पनि भएको थियो। न्यायको माग गर्दै पीडित परिवारले दाहसंस्कार गर्न मानेका थिएनन्।
पीडित परिवारले प्रहरीमाथि लापरवाहीको आरोप लगाएको छ। उजुरीका लागि १० दिनसम्म कुराएको, विरोध प्रदर्शनपछि मात्रै दर्ता भएको, एम्बुलेन्स समेत सहयोग नगरेको भाईको गुनासो छ।
पीडितको न्यायको लागि आजाद समाज पार्टीका नेता चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा दिल्लीस्थित सफदरजंग अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन भएको छ। उनीहरु धर्नामै बसेका थिए। चन्द्रशेखरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
घटनाको विरोधमा भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ। कलाकारदेखि आम नागरिकले अभियुक्तलाई फाँसीको माग गरेका छन्।
वीरगंज : वीरगंजका मेयर विजयकुमार सरावगीले नेपाल सरकारले भारतीय सीमा उच्च सतर्कता अपनाएर खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। वीरगंजको भिस्वाडाँडामा पर्यटन दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सीमा खोल्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
भिजिट मधेस नेपालले तराईको २२ वटा जिल्लामा पर्यटन दिवस मनाएको थियो। वीरगंजको पर्यटकीय स्थलको रुपमा चिनिने भिस्वाडाँडामा पनि अन्तरक्रिया गर्दै पर्यटकविनाको पर्यटन दिवस मनाइयो। अन्तरक्रियामा मेयर सरावगीले वीरगंजको होटल व्यवसायी सुक्न लाग्काले प्राण भर्न आवश्यक मापदण्ड पालना गरी नेपाल–भारत सीमा खोल्न आग्रह गरे।
‘वीरगंजको पर्यटन व्यवसाय सुकी सकेको छ, बर्बाद भइसक्यो, करोडौको लागानी डुब्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘वीरगंज नेपालको गेटवे अफ नेपाल हो, वीरगंज–रक्सौल नाका खोलियो भने वीरगंज, पर्साको मात्र भलाई हुँदैन, प्रदेश २ कै ८ जिल्लाको पर्यटन व्यवसायसँगै नेपालकै पर्यटन व्यवसायमा चमक आउन सक्छ।’
वीरगंज पब्लिक कलेजका सञ्चालक डा. दीपक शाक्यले प्रदेश २ का सम्पूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यलाई नयाँ पहिचान र प्रवर्द्धन गरी अगामी दिनमा अघि बढनु पर्ने जोड दिए।
कार्यक्रममा भिजिट मधेस नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफले पछिल्लो ७ महिनामा कोरोना महामारीको कारण तराईका २२ जिल्लाको पर्यटन व्यवसायमा कस्तो असर परेको र के गर्दा अहिलेको परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई शारदा भुसालको प्रश्न : हात समातेर लगेका हुन्थे, कहिले सोध्ने प्रयास गर्नु भो, यी नानी को हुन्?
काठमाडौं : पद्मश्री साहित्य पुरस्कार र पद्मश्री साधना सम्मानका लागि यसपटक छानिएका नामले चर्चित बन्दै गइरहेको पुरस्कार नराम्ररी विवादमा पर्‍यो। खेमलाल-हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठानले पुरस्कार स्थगित गरिसकेको छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा यसबारे बहस भने चलिरहेकै छ।
सञ्जिव उप्रेतीले पुरस्कार अस्वीकार गर्नुको कारण थियो, उनीसँगै मोदनाथ प्रश्रित पनि सम्मानित हुने सन्दर्भ। नेकपाको राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहेका साहित्यकार प्रश्रित शिक्षामन्त्रीसमेत रहिसकेका व्यक्ति हुन्। शारदा भुषालले किताव नै निकालेर प्रश्रितले गरेको यौन दुर्व्यवहार सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
उप्रेतीले पुरस्कार अस्वीकार गर्नुको मुल कारण शारदाको पुस्तक नै थियो जसले प्रश्रितलाई ‘व्यभिचारी’ स्थापित गर्‍यो। साहित्य श्रृजनामा अब्बल मोदनाथ प्रश्रित यसै प्रकरणले ‘वद्नाम’ भए। उनले शारदा भुषालले नियोजित रुपमा आफूमाथि आक्रमण गरेको दावी भने गरिरहे। त्यही प्रकरण अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। उप्रेतीले पुरस्कार अस्वीकार गरेपछि खेमलाल-हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठान पनि सकसपूर्ण अवस्थामा पुग्यो। सँगै यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भयो। प्रश्रितले यसैबीच पुरस्कार हालको अवस्थामा नलिने बताए। त्यसपछि प्रतिष्ठान पनि पुरस्कार स्थगित गर्ने अवस्थामा पुग्यो।
आरोप – प्रत्यारोपको यो श्रृङ्खलामा नेकपाका एकाथरी नेता/कार्यकर्ता प्रश्रितको प्रतिरक्षामा उत्रिन सुरु गरे। त्यो प्रतिकार दस्तामा एकाएक प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल पनि आइपुगे। प्रश्रितलाई बचाउन फेसबुक ‘वार’मात्र उत्रिएका पोखरेलले शारदा विरुद्धमात्र होइन, सञ्जिव उप्रेती विरुद्ध समेत अभिव्यक्ति दिए। समाज रुपान्तरणमा उप्रेतीले प्रश्रितले जस्तो योगदान दिन नसकेको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत प्रहार गरे, पोखरेलले।
भुषालले यौन अपराधमै प्रश्रितलाई मुछेकी छिन्। तर, मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रश्रितको बचाउनमा कडा रुपमा उत्रिए। आफ्नो क्षेत्रका नेताको रक्षा गर्न शंकर पोखरेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि उनीविरुद्ध नै सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरु खनिन थाले। उनका पक्षमा पनि कार्यकर्ता सोसल मिडियामा सक्रिय देखिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि प्रतिक्रिया जनाउने सूचीमा शरदा भुषाल पनि जोडिइन्। भुषालले शंकर पोखरेल पनि उनलाई दुर्व्यवहार हुँदा साक्षी भएको बताएकी छिन्।
‘बुटवल लगायतका ठाउँहरूमा विजय सभा हुँदा कतिपय ठाउँमा हजुरसँग पनि भेट भएको थियो। त्यतिबेला मलाइ प्रश्रितले हात समातेर लगेका हुन्थे। कहिले सोध्ने प्रयास गर्नु भो? यी नानी को हुन? किन हजुरसँग छिन् भनेर?,’ पोखरेलको स्टाटसमा शारदाले प्रश्न गरेकी छिन्।
पोखरेलले उनको प्रश्नको यो समाग्री तयार गर्दासम्म जवाफ दिएका छैनन्।